Xaalada Gobolka Galgaduud oo Degan ka dib Dagaalkii Shalay – SBC
Xaalada Gobolka Galgaduud oo Degan ka dib Dagaalkii Shalay
Posted by Webmaster on January 2, 2012 Comments
Xaalad Degenaansho oo aan caga buuran ku taagneen ayaa laga dareemayaa deegaano kuyaala gobolka Galgaduud oo uu shalay gelinkii dambe ka dhacay dagaal xoogleh oo dhexmaray Ciidamo kala taabacsan Culimada Ahlusuna waljamaaca iyo Xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Inkastoo aan jirin ilaa iyo iminka cid sitoos ah loo xaqiijiyay in ay leedahay gacan ku heynta deegaanadii lagu dagaalamay ayaa hadana waxaa jirta warar kale oo ay sheegayaan dadka deegaanka kuwaas oo ku aadan in labada dhinacba aanay ku sugneyn deegaanadii lagu dagaalamay oo midba midka kale uu dib uga durkay.
Ma jiraan iminka wax dagaal ah oo soconaya, inkastoo la dareemayo dhaq dhaqaaqyo labada dhinac iyo saan saan colaadeed oo deegaanka Siliga iyo goobo hoosyimaada ka soconaya.
Ilaa iyo hada ma jiraan warar la isku haleyn karo oo qeexaya khasaarihii ka dhashay dagaalkii dhacay, balse waxaa ilaa iyo iminka la xaqiijiyay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac, islamarkaana ay u badan yihiin dhaawac.
Sh Cabdi wali Xaaji diiriye oo ah Madaxa Arimaha Bulshada Ahlusuna waljamaaca ayaa u sheegay xafiiska SBC International ee Gobolkaasi Galgaduud in dagaalka ay ka ahlusuna ahaan sii wadi doonaan ilaa ay ka gaarayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan xarakada Alshabaab.
Sikastaba ha ahaatee Dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili gobolada dhexe deegaano ka mid ah ay ka bilowdeen dagaalo ay iska kaashanayaan ciidamada DKMG ah, Kuwa Itoobiya iyo maamul goboleedyada ka jira gobolka kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan Xarakada Alshabaabul mujaahidiin.
C/Jamaal Macalin Axmed
SBC International Galgaduud